Banyere Anyị - Cheng Ye Co., Ltd.
Ndewo, Nke a bụ ChengYe Co., Ltd,, Ngwá ọrụ Carbide na-emepụta kemgbe 1999, dị ka mkpanaka carbide, igwe ihe njedebe carbide, ntinye carbide, carbide burrs, carbide drills, reamers, ọkọlọtọ na ndị na-abụghị ọkọlọtọ.
A na-eji ngwá ọrụ carbide niile mee ihe kachasị mma; 5-axics CNC igwe ngwá ọrụ na robots na-eji na-emepụta njedebe ọgwụgwụ, drills, reamers.etc.Ị nwere ike nwalee samples na mbụ, MOQ 3pcs maka ọkọlọtọ, MOQ 5 pcs na-abụghị ọkọlọtọ. .A ga-atụ aro ka ị nweta ngwá ọrụ kachasị mma, ma anyị kwesịrị ịma ọnọdụ ojiji gị, bee Steel ma ọ bụ Aluminom.
Anyị nwere ike ịnye gị ngwá ọrụ carbide na-ewu ewu n'ọtụtụ; ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ, nnukwu ego; Anyị ga-ewere 0.1% nke iwu ọ bụla wee nye mba ndị dara ogbenye na Africa. Na akụrụngwa na-abawanye site na COVID-19, na-atụ anya na ị nwere ike ịnwale ngwá ọrụ carbide anyị n'oge na-adịghị anya. .
Lee ụfọdụ nzaghachi sitere n'aka ndị na-ere ahịa anyị:
Ọzọkwa, nabata ileta ụlọ ọrụ anyị oge niile, biya, ite ọkụ, ịhịa aka n'ahụ na-echere gị.
Ihe ngosi & ọrụ ndị ọrụ
Ụlọ ọrụ Cheng Ye Co.,Ltd.
Onye naegbu nri China Ball End Mill Carbide Burrs China Milling Cutter Ngwa lathes Ngwá ọrụ Carbide